यी हुन विश्वकै कामुक महिला राजनितिज्ञ, जसको बारेमा थाहापाउनुभयो भने उड्नेछ तपाईको होस् ! - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ११, २०७५ समय: १४:५४:१६
१०. मारिया रोसारिया (मारा कार्फाग्ना) : मारा इटलीको एक महिला राजनितिज्ञ हुन् । उनी समाा अवस मन्त्रालयमा रहेकी छन् । टिभीको कार्यक्रम प्रस्तोत र मोडल रहेकी उनी विश्वकै सुन्दरी महिलाको रुपमा परिचित रहेकी छन् । उनी टपलेस मोडल भएपनि रुढीवादी राजनितिज्ञको रुपमा चिनिन्छिन् । उनले आफुलाई नारीवादी विरोधी भएको दाबी गर्ने गरेकी छन् । उनी यौन व्यवसायको चर्को आलोचना गर्छिन् ।